Evgeni Aldonin - यो क्षेत्रको फुटबल ठूलो खेल मा प्राप्त भएन जस्तो देखिने को व्यवस्थित मानिस। उहाँले शहरी-प्रकार बन्दोबस्त मा, 1980 मा जन्म भएको थियो, 22 जनवरी, नाम जो धेरै असामान्य हुनेछ। Alupka - क्रिमीआ को दक्षिणी तट मा एउटा सानो सहरमा। क्षेत्र ज्ञात याल्टा आसन्न छ। खैर, Crimea मा विकसित गरेको छ फुटबल धेरै mediocre छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, Evgeni Aldonin सिर्फ ठूलो क्लब मा, तर पनि रूसी टोली मा प्राप्त गर्न प्रबन्धन।
आफ्नो युवावस्थामा इच्छुक मिडफिल्डर Alupka मा छोराछोरीको खेल स्कूल गए। वास्तवमा, Evgeni Aldonin यसको छात्र छ। तर, 16 वर्ष मा, त्यो बेलग्रेड मा क्रिमीआ बाँकी। त्यहाँ बेलग्रेड खेल बोर्डिङ "रोटर" आइपुगे मिडफिल्डर। एक पेशेवर क्यारियर तिर पहिलो कदम स्कूल एक छात्र रूपमा, लिन थाले। 1997 देखि 2000 उहाँले जो "रोटर-2" भनिन्छ थियो बोर्डिङ, को खेत क्लब प्ले। तीन वर्ष टोलीमा एक मिडफिल्डर रूपमा प्ले। र त्यसपछि, 2000 देखि र सीधा "रोटर" पारित। उहाँले 98 पटक क्षेत्र मा बाहिर गए र7लक्ष्य जारी गरेको छ।
सबै भन्दा प्रसिद्ध रूसी क्लब जाने - 2004 मा Evgeni Aldonin धेरै आकर्षक र लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त। को PFC CSKA! निस्सन्देह, उहाँले लामो लाग्यो र सहमत भए। मार्च 12 मा, उहाँले नयाँ टीम मा आफ्नो debut गरे। यसलाई विरुद्ध goalless तान्ने मा समाप्त भयो एफसी "Torpedo-Metallurg", एक मिलान थियो।
2012 मा, फुटबल खेलाडी एफसी "Mordovia" र CSKA रुचि को मिडफिल्डर लागि पट्टा निष्कर्षमा पुग्न एक प्रस्ताव गरे। लेनदेन भयो। "Mordovia" फुटबल खेलाडी 20 मिलान प्ले लागि, उहाँले एक सहयोग गरे र चार एक "पहेंलो कार्ड" पाए।
2013,2सेप्टेम्बर मा, CSKA एव्जेनी Aldonin बाँकी। फुटबल खेलाडी को "वोल्गा" साथ दिए। तर क्लब राष्ट्रिय प्रिमियर लिग देखि relegated पछि, त्यो संरचना देखि resigned।
खैर, 2000 मा, फुटबल खेलाडी रूसी टोलीलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। त्यहाँ उहाँले मिडफिल्डर पकड को स्थिति लिए। 2004 मा उनी र उनको टोली युरोपेली च्याम्पियनसिप भाग लिए। र केही खेल मा, पनि साथ क्षेत्र बाहिर कप्तान गरेको armband।
Evgeni Aldonin: प्रेम जीवन
फुटबल मिडफिल्डर मा धेरै हासिल गरेको छ। उहाँले रूस दुई-समय च्याम्पियन भए, तीन पटक दुई पल्ट प्रतियोगिताको मा तेस्रो स्थानमा समाप्त - दोस्रो। सुपर बाउल - पाँच पटक रूस को कप, र चार पाए। र टोलीसँग म यूईएफए कप प्राप्त। र के व्यक्तिगत अगाडि मा संग्रामहरू जीतेको बारेमा? 2006 मा, त्यो जूलिया Aldonin Nachalova, रूसी गायक विवाह गरे। उनि पनि एक छोरी थिए। तर, विवाह धेरै सानो लामो थियो। त्यसै वर्ष मा, डिसेम्बर मा, जवान छोडपत्र लागि दायर गरेका छन्। गायक को भाग मा विश्वासघात बारम्बार - कि अक्सर प्रेस मा रिपोर्ट छ जो कारण, छ। यसबाहेक, त्यो नाम द्वारा हकी खेलाडी संग प्रेम सम्बन्ध थियो अलेक्जेन्डर Frolov। तर Aldonin निष्क्रिय रहन थिएन।
क्षणमा उहाँले भिक्टोरिया नाम केटी पूरा गर्दछ। सोही, यो एक रोचक र अनौठो nuance टिप्पण लायक छ। भिक्टोरिया, त्यो आफु भनेअनुसार र तिनीहरूले मिडिया पहिले मात्र मानवताको सुन्दर आधा प्रतिनिधिको भेटे भन्न रूपमा। पहिले, यो पुरुष रुचि थियो। तर अब हामी यूजीन एकदम मधुर स्वर हेर्न संग उनि कि हेर्नुहोस्।
आदम जनसन: एक फुटबल खेलाडी को एक जीवनी
फुटबल एजेन्ट जर्मन Tkachenko: जीवनी र फोटो
साझेदार बिना चुम्बन कसरी सिक्न जान्न चाहनुहुन्छ?
बच्चासँग 38 को बुखार छ र खाँसी सुकेको छ: कारणहरू र उपचार
फैशन trendsetter - आर्किड मनका।